ခရစ်ယာန်တို့၏မဟာစစ်ပ | The Christian's Greatest Battle | Real Conversion
၂၀၁၂၊ဩဂုတ်လ၁၉ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊
သခင်ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်
“ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျှက်၊ ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ဆုတောင်းကြလော့။ ထိုသို့ ဆုတောင်းခြင်းငှါအားမလျှော့ဘဲလျှက်၊ ငါမှ စ၍ သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အဖို့ စောင့်ရှောက်ကြလော့။(ဧဖက်၆း၁၈)။
ဧဖက်အခန်းကြီး၆၊ အခန်းငယ်၁၂မှ၁၇နှင့်ပတ်သက်၍၊ ဘုရားသခင်၏ စစ်ဝတ် စုံအကြောင်း၊ ဒေသနာတော်ကို အကြိမ်များစွာကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ သို့ပါသော်လည်း တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုက ထိထိမိမိသိစေလိုသော ကျမ်းစာတော်၏ ဆိုလိုရင်းကိုမူ၊ မှတ်မှတ်ရရမရှိခဲ့ချေ။ တခုတလေ ကြားကောင်းကြားခဲ့ပါသော်ငြားလည်း ယခုမမှတ်မိ တောပေ။ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို ထိထိမိမိနားလည်ဖို့ရန် “မာန်နတ်၏ ပရိယာယ်တို့kdကို ဆီးတားနိုင်ရန်” (ဧဖက်၆း၁၁)အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ စစ်ဝတ်စုံကို သိနားလည်ဖို့လိုပါသည်။ “ဆီးတားခြင်း”ဟူသော စကားလုံးသည် ဧဖက်၆း၁၁နှင့်၁၂တို့ ၌ ငါးကြိမ်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ရန်သူ၊ မာန်နတ်ရှုံး နိမ့်ကြောင်း ခိုင်လုံသောကျမ်းတော်မြတ်၏ အမှန်တရားကို ကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်ပါသည်။
၁။ ပထမ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုတောင်းဖို့ လိုအပ်ခြင်းသည်၊ မာန်နတ်နှင့်အပေါင်း အပါများ ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မာန်နတ်ကို “ဆီးတား”ဖို့လိုကြောင်း သတိပေးခြင်းခံကြရသည်။ ကျွန်ုပ်ုတို့သည် သွေးသားရှိသော ရန်သူတို့နှင့် “ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်”ရကြသည်မဟုတ်ဟု သတိပေးထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “အထွဠ်အမြတ်တို့နှင့်၎င်း”၊”ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်” ရကြသည် နတ်ဆိုးအပေါင်းတို့အား ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်သာ အနိုင်ယူနိုင်ပါသည်။ မှတ်ချက်ဧဖက်၆း၁၂၊ ဒေါက်တာဂျေဗန်နုန်မက္ကီး ပြောကြားရာတွင်၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်ဆိုးများနှင့် တိုက်လှန်ကြရပါသည်။ မာန်နတ် သည် သူ၏အပေါင်းအပါတို့ကို ရာထူးအလိုက်အခင်းအကျင်း ပြုထားပါသည်၊ ၎င်းဝိညာဉ်များတို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်လှန်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ ပြောကြားရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်ဆိုးများ တို့နှင့် မနှစ်မြို့ဘဲ၊ တွေ့ကြုံရကြ၍ဖြစ်သည်။ ဤလောက၌ မာန်နတ်နှင့် အပေါင်းအပါတို့က ကျွန်ုပ်တို့အား အချိန်တိုင်း၌ ဝန်းရံနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်၌ပင်လျှင် မာန်နတ်နှင့်အပေါင်းအပါတို့၏ နေရာရှိနေပါ သည်။ ထိုရန်သူသည် ဝိညာဉ်ဆိုးများဖြစ်ပါသည်။ စာတန်သည် ထိုဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏ အချုပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့စဉ်ဝိညာဉ် ဆိုးများရှိနေသည်ကို အသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ အသင်းတော်တို့ သည်လည်း၊ ထိုဝိညာဉ်ရေးရာ စစ်ပွဲထဲပျောက်ခြင်း မလှပျောက်နေကြ ရပါသည်။ (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, pp. 279-280; note on Ephesians 6:12).
ကျွန်ုပ်တို့သည် စာတန်နှင့်အပေါင်းအပါတို့နှင့် ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်နေကြရသည်ကို သင်သိလည်းသိနိုင်သကဲ့သို့ မသိဘဲလဲရှိနေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္တာကို အတွေးအ သားဖြင့်၊ တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် မာန်နတ်ကို အာနိုင်ယူဖို့လုံး၀ နည်းလမ်းမရှိချေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ စစ်ဝတ်စုံကို ဆောင်ကြပြီး စာတန်မာန်နတ်နှင့် အပေါင်းအပါတို့ကို တိုက်လှန်ကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၁၄၈၃-၁၅၄၆) ခုနှစ်တုန်းက၊ ဘာသာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးသူ မာတင်လုသာက မာန်နတ်နှင့် ပါတ်သက်၍ အာဂျယ်တဝန့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မာန်နတ်နှင့်ပါတ်သက်၍ မာတင်လုသာ၏ ရေးသားသီကုံးသော ဓမ္မသီချင်းစာသား အချို့ကို ကောက်နုတ်သီဆို ပါမည်
(၁၄၈၃-၁၅၄၆ခုနှစ်၊ မာတင်လုသာသီကုံးသော ကိုယ်တော်သည်သာ
စာတန်နှင့်အပေါင်းအပါတို့အား ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲသို့ အနိုင်ယူနိုင်မည်နည်း? ဆုတောင်းခြင်းမှတပါး အဘယ်ကဲ့သို့သော နည်းလမ်း ကျွန်ုပ်တို့၌ မရှိတော့ပေ! ဆုတောင်းခြင်းသည် ဝိညာဉ်စစ်ပွဲဖြစ်ပါသးည်! ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် စာတန်မာန်နတ်နှင့် အပေါင်းအပါတို့အား အနိုင်ယူနိုင်ပါသည်!
“မာန်နတ်၏ ပရိယာယ်တို့ကို ဆီးတားနိုင်မည်အကြောင်း ဘုရားသခင် ပြင်ဆင်တော်မူသော လက်နက်စုံကို ဝတ်ဆောင်ကြလော့” (ဧဖက်၆း၁၁)။
“ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျှက် ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ဆုတောင်းကြလော့။ ထိုသို့ ဆုတောင်းခြင်းငှါ အားမလျှော့ဘဲလျှက် ငါမှစ၍ သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အဖို့ ဆုတောင်းလျှက်စောင့်ရှောက်ကြ လော့” (ဧဖက်၆း၁၈)။
စာတန်နှင့်အပေါင်းအပါတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရန်သူပင်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ရှေတိုးကြရမည်။ ဆုတောင်းခြင်းသည် ဝိညာဉ်စစ်ပွဲ ဆင်နွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်!
(၁၈၇၉-၁၉၆၆၊ အယ်လ်ဘတ်အက်စ်ရိက်စ်သီကုံးသော “သွန်သင်မူပါ”)။
ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စဉ်ဆက်မပြတ်၊ ဆုတောင်းကြမည်ဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာ စာတန်မာန်နတ်နှင့်အပေါင်းတို့သည် နေရာတိုင်း၌ ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ စာတန်သည် ခွန်အားကြီးပြီး၊ ဘယ်တော့မှ မောပန်းခြင်းမရှိပါ၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစဉ်သဖြင့် ဆုတောင်းခြင်းမရှိလျှင်၊ မာန်နတ်ကို အနိုင်ယူနိုင်မည်မ ဟုတ်ဘဲ၊ အသင်းတော်၌လည်း ဝိညာဉ်အသစ်များမြဲနေအောင် လုပ်ဆောင်နိုင် မည်မဟုတ်ပေ။ ပထမအချက်အနေဖြင့်၊ အစဉ်မပြတ်ဆုတောင်းကြရမည်၊ သို့မဟုတ် လျှင်၊ ဧဝံဂေလိဝေငှရာတွင် အသစ်သောဝိညာဉ်များကို အသင်းတော်၌ ပို့ဆောင်မည် မဟုတ်ပေ။
၂။ ဒုတိယ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုတောင်းဖို့ လိုအပ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့kလိုအပ်သော အရာရရှိ နိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
တမန်တော်ရှင်ယာကုပ်က၎င်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြထားပါသည်။
“သင်တို့သည် အလိုမပြည့်စုံနိုင်ကြ၊ အကြောင်းမူကား၊ ဆုမတောင်းဘဲနေ ကြ၏” (ယာကုပ်၄း၂)။
၎င်းကျမ်းပိုဒ်သည်၊ သင်ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင်၊ အနည်းငယ်မျှကိုသာ ရရှိခြင်းအကြောင်းကို ပြသနေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် အနည်းငယ်မျှသော ဝိညာဉ်ကို သာရရှိကြရသနည်း? “သင်တို့သည် အလိုမပြည့်စုံကြ၊ အကြောင်းမူကား ဆုမတောင်း ဘဲနေကြ၏” စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုတောင်းခြင်းကို လှစ်လှူရှုထားသောကြောင်း များစွာသော ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ အသင်းတော်၌ ရောက်မလာကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တမန်တော်များတို့သည် မိမိတို့၏သာသနာတော်မြတ်၌ ဆုတောင်းခြင်းကို အထူးသဖြင့် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ နေ့ရက်စဉ်အသင်းတော် ကိစ္စအဝ၀အား ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်၊ တမန်တော်များတို့သည်၊
“ငါတို့မူကား ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်း၊ နုတ်ကပတ်တရားတော်ကို ဟောကြားခြင်း၊ အမှုတို့ကို အမြဲပြု၍ နေမည်ဟုဆိုကြ၏” (တမန်၆း၄)။
“ငါတို့မူကား ဆုတောင်းငဌနာပြုခြင်း အမှုတို့ကို အမြဲပြု၍နေမည်ဟု ဆိုကြ၏” တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည်လည်း မိမိနေ့စဉ်အသက်တာကို ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်စေခဲ့သည်။ သက်သာလောနိတ် အသင်းတော်ဆုတောင်းခြင်း၌ ရှင်ပေါလုပြော ကြားခဲ့သည်မှာ၊ “နေ့ညဉ့်မပြတ်အလွန်တရား ဆုတောင်းငဌနာပြု၍နေကြ၏” (၁သက် ၃း၁၀)ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ရှင်ပေါလုက၊ တိမောသေအား ပြောကြားရာတွင်၊ “နေ့ညဉ့်မပြတ် ငါဆုတောင်းပဌနာပြုသည်တွင် သင့်ကိုမခြားမလပ်အောက်မေ့သည် ဖြစ်၍” (၂တိမော၁း၃)ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
တမန်တော်ရှင်ပေါလု၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုတောင်းခြင်းသည် ခရစ်တော်ဘုရား၏ ခြေတော်ရာကို လိုက်လျှေက်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တော်သည်၊
“နံနက်အချိန်၊ မိုးမလင်းမှီကိုယ်တော်သည် ထပြီးလျှင် တောအရပ်သို့ ထွက်ကြွ၍ ဆုတောင်းတော်မူ၏”(မာကု၁း၃၅)။
“ထိုနေ့ရက်ကာလ၌ ကိုယ်တော်သည် ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်းငှါ တောင်ပေါ်သို့ကြွ၍ ဘုရားသခင်အား၊ ဆုတောင်းပဌနာပြုလျှက်တစ် ညဉ့်လုံးနေတော်မူ၏” (လုကာ ၆း၁၂)။
“ဆုတောင်းခြင်း” “ပဌနာပြုခြင်း”ဟူသောစကားလုံးသည် ခရစ်တော်ဘုရားအသက်တာ၌ ၂၅ကြိမ်ထက်မနည်း၊ သတင်းကောင်းကျမ်းလေးစောင်၌ မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ အကြိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာ “ဆုတောင်း”ခဲ့ကြေင်းနေရာအတိအကျကို မဖေါ်ပြခဲ့ပေ။ ယေရှုသည် မိမိအသက်တာ၌ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆုတောင်းပဌနာပြုခဲ့ပါသည်။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆုတောင်းခြင်းမရှိသော ယောင်္ကျား၊ မိန်းမတို့သည် ယေရှုနှင့် ရှင်ပေါလု၊ နောက်မလိုက်သောသူများဖြစ်ပါသည်။
ယေရှုသည် အဖခမည်းတော်ဘုရား၏ လင်္ကျာတော်ဖက်၌ စံမြန်းတော်မူရန်အ တွက်၊ ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွတော်မူသောအခါ၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ အထူးသဖြင့် ဆုတောင်းပေးခြင်းကို ပြုလျှက်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားမိန့်တော်မူ သည်မှာ၊
“ထို့ကြောင့် အကြင်သူတို့သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်အထံ တော်သို့ ချဉ်းကပ်ကြ၏။ ထိုသူတို့၏အမှုကို၊ ကိုယ်တော်သည် စောင့် လျှက်၊ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့် သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်း ငှါတတ်နိုင်တော်မူ၏” (ဟေဗြဲ ၇း၂၅)။
ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်တော်မူရန် တတ်နိုင်တော်မူသည်၊ ကားတိုင် ပေါ်၊ အသေခံခြင်းသာမကပဲ၊ ကောင်းကင်ဘုံတွင်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် “ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့် သူတို့ကို အစဉ်ကယ်တင်ခြင်ငှါတတ်နိုင်တော်မူ၏” အဓိကအားဖြင့် ယေရှုသည် ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ယနေ့မစနေတော်မူသည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ဆုတောင်းပေး တော်မူသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရကြပြီ။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက၊ ရောမ၈း၃၄၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ “ဘုရားသခင်၏ လင်္ကျာတော်ဘက်၌နေလျှက်၊ ငါတို့ အဖို့ဆုတောင်းသောသူကား၊ ခရစ်တော်ပေတည်း”ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့လည်း ခရစ်တော်ဘုရားနှင့် မိတ်သဟာရရှိလိုပါက၊ အကြိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာ အခြားမလပ် ဆုတောင်းနေကြရမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ခရစ်တော်က သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အဖို့အသနားခံဆုတောင်း ခြင်းမရှိလျှင်၊ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ အသက်တာပျက်စီးနေလောက်ပြီဟု အသေအချာ ပြောနိုင်ပါသည်။ ၁၉၅၀ခုနှစ်ခန့်တွင်၊ တရုတ်နိုင်ငံ ကွန်မြူးနစ်ဝါဒီတို့က နိုင်ငံခြားသာသနာပြုတို့အား မောင်းထုတ်နေချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၌ ခရစ်ယာန်ပေါင်းတစ်သန်းခန့်သာရှိသည်။ သို့သော် ယနေ့တွင် တရုတ်နိုင် ငံ၌ ခရစ်ယာန်သန်းတစ်ရာကျော်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒီတို့၏ အစွန်းရောက် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းရှိနေသော်ငြားလည်း၊ အနှစ်၆၀ကျော်ကြာလာသောအခါ တရုတ်နိုင် ငံတွင် အဆပေါင်း၁၀ç၀၀၀%ရာခိုင်နှုန်း ခရစ်ယာန်များ မြင့်တက်လျှက်ရှိနေပါသည်။ (ဟေဗြဲ ၇း၂၅)၌ မိန့်တော်မူထားသကဲ့သို့ “သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းငှါတတ်နိုင်တော် မူ၏”ဟူ၍ မိန့်ကြားထားသည့်အတိုင်း ခရစ်တော်သည် ယနေ့ကောင်းကင်ဘုံဝယ်သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအဖို့ ဆုတောင်းပဌနာပြုနေသာကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းအထောက် အထားအရ၊ မွတ်ဆလင်အများဆုံးသော တိုင်းနိုင်ငံသည်လည်း ယခုတွင် ခရစ်ယာန်ဖြစ် နေကြပြီဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေပြီး ဆုတောင်းမပေးလျှင် ထိုသို့ဖြစ်နိုင်စရာမရှိပါ၊ ခရစ်တော်သည် “ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့် သူတို့ကို အစဉ်ကယ်တင်ခြင်းငှါ တတ်နိုင်တော်မူ၏” (ဟေဗြဲ ၇း၂၅)၌ မိန့်တော်မူထားပါသည်။
ယနေ့တရုတ်နိုင်ငံနှင့် မွတ်ဆလင်ကမ္ဘာတွင် ထိုသို့ဖြစ်လာခြင်းသည်၊ ခရစ်တော် ဘုရား၏ ဆုတောင်းပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နည်းတူစွာ ခရစ်ယာန်အပေါင်းတို့၏ ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကြားဝင်ကိုယ်စားဆုတောင်းပေးဖို့၊ ဘုရား သခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ခရစ်တော်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိနေစေလိုပါသည်။ အသင်းတော် များ၌လည်း မြောက်များစွာသော ဝိညာဉ်များရောက်ရှိစေလိုပါလျှင်၊ များစွာသော ဆုတောင်းခြင်း အချိန်ကိုယူရမည်ဖြစ်ပါသည်၊ တိတ်ဆိတ်သော နေရာ၌ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ကျင့်သုံးရန်နေ့စဉ် အလေ့အထရှိရပါမည်။ ထိုသို့ နေ့ရက်စဉ် ယုံကြည်သူလူသစ်များအဖို့ ဆုတောင်းဖို့လိုပါသည်။ ထိုသို့ ဘုရားသခင်ထံ သင်ဆုတောင်းနေပါလျှင်၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်သို့ ခေါ်ဆောင် နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်များစွာတို့အား၊ ဖမ်းဆီးခဲ့ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်း ဆုတောင်းခြင်းအား အစဉ်ပြုလျှက်အမှုဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသူတို့၏ လုပ်ဆောင် ချက်နည်းလည်းမတူ၊ ခြားနားလျှက်ရှိသည်။ သို့သော် ဆုတောင်းခြင်း၌ ကားအတူတူပင် ဖြစ်သည်။ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များစွာရရှိဖို့ကား၊ အချိန်များစွာ ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် လုပ်တောင်ခဲ့ကြပါသည်။
“ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျှက်၊ ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်းအမျိုးတို့ဖြင့် ဆုတောင်းကြလော့။ ထိုသို့ ဆုတောင်းခြင်းငှါ အားမလျှော့ဘဲလျက်၊ ငါမှစ၍ သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့အဖို့ ဆုတောင်းလျှက် စောင့်လျှောက် ကြလော့”(ဧဖက် ၆း၁၁၈)။
ဝမ်းနည်းခြင်း အပြစ်ဒုစရိုက် ဤကမ္ဘာဝယ်
၃။ တတိယ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုတောင်းဖို့ လိုအပ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ် လိုအပ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသောသနားခြင်း၊ ဂရုဏာတော်နှင့် ကျေးဇူးတော်ခံစားဖို့ ကူညီပေး၍ဖြစ်သည်။
ဟေဗြဲဩဝါဒစာ၄း၁၆ ကျွန်ုပ်တို့၏ဧဝံဂေလိ လုပ်ငန်းစဉ်၌ အမှန်တကယ်လိုအပ် နေသော သနားခြင်းဂရုဏာတော်နှင့် ကျေးဇူးတော်ကို ခံစားဖို့ရန် ကူညီမစပေးပါသည်။
“ထို့ကြောင့် ငါတို့သည် သနားခြင်းဂရုဏာကို၎င်း။ တော်လျှော်သောမစ ခြင်း ကျေးဇူးတော်ကို၎င်း၊ ခံရမည်အကြောင်း ရဲရင့်သောစိတ်နှင့်ကျေးဇူး ပလ္လင်တော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြကုန်အံ့(ဟေဗြဲ ၄း၁၆)။
၎င်းကျမ်းပိုဒ်က အရေးကြီးသဖြင့်၊ မိတ်ဆွေတို့၎င်း ကျမ်းပိုဒ်ကို ဖွင့်ထားပေးစေလိုပါ သည်။ ၎င်းသည် ဟေဗြဲအခန်းကြီး၄၊အငယ်၁၆ဖြစ်သည်။ စကော့ဖီလ်းစတာဒီ ကျမ်းစာတော်၌ စာမျက်နှာ၁၂၉၄ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မတ်တပ်ရပ်လျှက်၊ အသံကျယ် လောင်စွာ ဖတ်ကြားကြပါစို့။
အားလုံးဤကျမ်းပိုဒ်သည် “အချိန်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်မှု” ကျေးဇူးနှင့်သနားခြင်း ဂရုဏာကို ခံစားရန် သွန်သင်နေပါသည်။ ဤကျမ်း၌ပါသော ကျေးဇူးနှင့် ဂရုဏာသည် “အချိန်တိုင်း” ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ လိုအပ်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်ကာလ” ထဲရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်ကာလဖြစ်သည်နှင့် အမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်အရွယ်နုပျိုသော လူငယ်မောင်မယ်တို့ကို အသင်းတော်သို့ ကြိုးစား၍ ခေါ်ဆောင်ခဲ့ကြရပါသည်။ အများသောသူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်း မရရှိသေး သူများဖြစ်ကြသည်။ အလွန်ပင် ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းကို မတွေ့ဝံ့စရာပါ။ ထိုသို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကုန်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်သည် ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်သွား သောအခါ အနည်းငယ်သော လူငယ်များသာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ကျန်ရစ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ ပုံမှန်အတိုင်းလွှတ်ထားမည်ဆိုလျှင်၊ ထိုအနည်းငယ်သောသူတို့သည်လည်း ခရစ္စ် မတ်ရာသီ၌သာ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ခဏဘုရားကျောင်းသို့ ရောက်လာမည်ဖြစ်သည်။ သတိရကြည့်ပါ၊ ခရစ္စမတ်ရာသီလည်းမကြာမှီ ရောက်ရှိလို့လာပါတော့မည်။ ခရစ္စမတ်ရာသီသည် လာမည့်အပတ်ပေါင်း၁၇ပတ်သာ လိုပါတော့သည်။ ထိုလာမည့် အချိန်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကျော်လွန်သွားမကြာမှီ ရောက်ရှိလာမည့် အချိန်ကာလကဲ့သို့ ဖြစ်ပြန်အုံးမည်ဖြစ်သည်! သင်ယုံသည်ဖြစ်စေ၊ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ ခရစ္စမတ်အချိန် မကြာမှီရောက်လာပါတော့မည်! လူအနည်းငယ်တို့သည်သာ အသင်းတော်၌ ခေါ်ဆောင် လာဖို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ အချိန်အနည်းငယ်သာကျန်ရှိ ပါသည်။ များမကြာခင်၊ ရိတ်သိမ်းချိန် လွန်ကာလကုန်လွန်ပါတော့မည်။ ။
ပျောက်ဆုံးလူသားတို့အား အသင်းတော်သို့ ခေါ်ဆောင်ကြမလား? ကျွန်ုပ်တို့အ စဉ်အမြဲ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ကြပါစို့လား၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်များကဲ့သို့ ဖြစ်နေမှာလား? မာန်နတ်သည် အရင်လိုဘဲ သင့်အားသွေးဆောင်နေပေမည်! မာန်နတ်က၊ သင်အသိစိတ် နိုးကြားလာပြီး အသင်းတော်၌ ရောက်လာဖို့မလိုလားပေ။ မာန်နတ်သည် သင့်အား ငိုက်မျဉ်းအိပ်မျှော်လျှက်၊ ထိုင်းမှိုင်းစေလိုပါသည်။ ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်ကောက်လှိုင်းများကို စာတန်သည် တခုမကျန်အောင်မှုတ်ထုတ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဘုရားရှင်သည်၊ သင့်အား ဝိညာဉ်အသိရှိဖို့၊ သတိရှိလျှက်နိုးကြားနေဖို့ သင့်အားဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။ သင်နိုးကြားနေဖို့ ဘုရားသခင် ဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့်အား တည်ကြည ၊် ခိုင်မြဲ ၊ ဆက်လက f၍ လူငယ်များအဖို့ ဆုတောင်းဖို့ သင်အားဖိတ်ခေါ်ပါ သည်။ မာန်နတ်ကို အနိုင်ယူနိုင်ဖို့အောက်ပါ ကျမ်းစာတော်ကို နာခံဖို့လိုပါသည်။
ယခုအချိန fသည် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၊ တနှစ်ပတ်လုံးအတွက် အရေးကြီးသော အချိန်အခါဖြစ်ပါသည်! ယခုအချိန်သည် ကျွန်ုပ်တို့အမှန်”လိုအပ်နေသောအချိန်” ပင်ဖြစ် သည်! , ခုအချိန် သည် ဘုရားသခင်အထံတော်က ကျေးဇူးနှင့်ဂရုဏာတော်ကို လိုအပ်နေသော အချိန်လည်းဖြစ်ပါသည်! , ခုအချိန် သည် ဘုရားသခင်အထံတော်က မစခြင်းကို လိုအပ်သောအချိန်ဖြစ်သည်! “ရဲရင့်သောစိတ်နှင့် ကျေးဇူးပလ္လင်တော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြကုန်အံ့” စိတ်နှလုံးပါလျှက် အစဉ်မပြတ် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တို့အဖို့ ဆုတောင်းပဌနပြုကြပါစို့! ဤဝိညာဉ်စစ်ပွဲ၌ ရန်သူအားအနိုင်မပေးလိုက်ပါနှင့်! ဝိညာဉ် စစ်ပွဲ၌ပါဝင်ပါ။ “ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလျှက် ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်း အမျိုးမျိုး တို့ဖြင့် ဆုတောင်းကြလော့။ ထိုသို့ ဆုတောင်းခြင်းငှါ အားမလျှော့ဘဲလျှက်၊ ငါမှစ၍ သန့်ရှင်း သူအပေါင်းတို့အဖို့ ဆုတောင်းလျှက်စောင့်ရှောက်ကြလော့” (ဧဖက်၆း၁၈)။ လာမည့်အ ပတ်များ၌ လူသစ်များကို အသင်းတော်၊ ခေါ်ဆောင်လာနိုင်ဖို့ အထူးသဖြင့် ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းပေးစေလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် သူတို့အဖို့ “ကျွန်ုပ်ဆုတောင်း ပေးမည် ဆုတောင်းပေးမည်၊ ဆုတောင်းပေးမည်”ဟုဆိုသော သူတစ်ဦးဖြစ်စေလို ပါသည်။ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှနှင့် ကျွန်ုပ်လည်း ဆုတောင်းပါမည်။ ဘာပဲလုပ် ဆောင်ပါစေ၊ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် စသင်ပါသည်”! တနေ့လျှင် ၁၅မိနစ်ခန့် နေ့ရက်စဉ်၊ ဆုတောင်းပေးစေလိုပါသည်။ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များအတွက် တနေ့လျှင် အနည်းဆုံး၁၅ မိနစ် ဆုတောင်းပေးဖို့ စီစဉ်ရေးဆွဲထားလိုက်ပါ!
ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ရိတ်သိမ်းချိန်ကာလ လွန်မတိုင်ခင်၊ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များအဖို့ တနေ့လျှင် အနည်းဆုံး၁၅မိနစ်၊ ဆုတောင်းပေးလိုသော သူများကျွန်ုfပ်တို့နှင့်အတူ ပေါင်း စည်းကြဖို့ ရှေ့သို့ထွက်လာကြပါ၊ မစ္စတာလီနှင့် မစ္စတာဘေဘောက်တို့မှ ဆုတောင်း ပေးမည်ဖြစ်သည်။ သင်သည်လည်း ထိုကတိအတိုင်းတနေ့လျှင် ၁၅မိနစ်ခန့် ပျောက်ဆုံး ဝိညာဉ်များအတွက် ဆုတောင်းပေးဖို့ ဂတိတည်ပါ။ အောက်ပါဓမ္မသီချင်းစာပိုဒ် သီဆို နေစဉ် ရှေ့သို့ထွက်လာကြပါ!
နောက်တခုလောက်ပြောလိုပါသေးတယ် အသင်းတော်၌ အသစ်ရောက်လာသော သူရှိပါသလား။ သင့်အပြစ်အဖိုးအခဖြစ်သော သေခြင်းအတွက် ခရစ်တော်ကားတိုင်ပေါ် အသေခံပေးပြီဖြစ်သည်။ ခန္တာကိုယ်အားဖြင့် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီး အထက်ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွတော်မူပြီဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်ယေရှုသခင်ထံ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ၊ သို့ပြုလျှင် သခင်သည် သင့်အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ပြီး၊ ထာ၀ရအသက်ကို ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဘယ်ပဲရောက်ရောက်၊ ဘာပဲလုပ်လုပ် နောက်အပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ ဤဘုရားကျောင်းသို့ အရောက်လာဖို့ ကြိုးစားပါ! ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးသွန်းလောင်းတော်မူပါစေ! အာမင်
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိအယ်လ်ချန်မှ ဧဖက်ဩဝါဒစာ အခန်းကြီး၆ အခန်းငယ်၁၀-၁၈အထိကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင်မင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၄၈၃-၁၅၄၆ခုနှစ် အာဘတ် အက်စ်ရိက်စ် သီကုံးရေးသားသော “ဆုတောင်းတတ်ဖို့ မစတော်မူပါ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
၁။ ပထမ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုတောင်းဖို့ လိုအပ်ခြင်းသည်၊ မာန်နတ်နှင့် အပေါင်းအပါများ ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဧဖက်၆း၁၁၊ ၁၈။
၂။ ဒုတိယ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုတောင်းဖို့ လိုအပ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော အရာရရှိ နိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယာကုပ်၄း၂၊ တမန်၆း၄၊ ၁သက် ၃း၁၀၊ ၂တိ၁း၃၊ မာကု ၁း၃၅၊ လုကာ၆း၁၂၊ ဟေဗြဲ ၇း၂၅၊ ရောမ ၈း၃၄
၃။ တတိယ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုတောင်းဖို့ လိုအပ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ် လိုအပ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသော သနားခြင်း၊ ဂရုဏာတော်နှင့် ကျေးဇူးတော်ခံစားဖို့ ကူညီပေး၍ဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ၄း၁၆